★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားအရေး လက်ပိုက်ကြည့်လိုသူများအတွက်
ထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ရက်စက်မှုကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ထိုင်းအနေအထား ရောက်တဲ့အထိ လက်ပိုက် ကြည့်လိုဟန်ရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူတူ ပိတောက်မြေဘလော့က ကိုရခိုင်သား ဆောင်းပါးမှ ကုလားတွေ တောင်းဆိုချက်ကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ရခိုင် မြောက်ပိုင်းကို ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတောင်တန်း၊ ကချင်ဒေသ တွေလို လွတ်လပ်သော မူဆလင် ပြည်နယ်အဖြစ် အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းပေးရန်။ ပြည်နယ် စစ်တပ်၊ ပြည်နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့၊ ပြည်နယ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ထားရှိရန်။
၂။ စစ်တွေမြို့ကို ရခိုင် တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်း ပူးပေါင်းမြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ မြို့နှင့် ဆိပ်ကမ်း ကွပ်ကဲမှုကို ရခိုင်နှင့် မူဆလင် ငါးဆယ် ရာခိုင်နှုန်းစီ အုပ်ချုပ်ခွင့် ပြုရန်၊ ပထမဆုံး မြို့တော် ၀န်နှင့် တိုင်းမင်းကြီးကို မူဆလင် လူမျိုးအထဲမှ ခန့်ထားရန်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွင် မူဆလင် ငါးဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရန်။
၄။ ဗဟို အစိုးရတွင် မူဆလင်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး ခန့်ထားရန်။
၅။ လူမျိုးစု လွှတ်တော်သို့ အခြားပြည်နယ်များ နည်းတူ ကိုယ်စားလှယ် အညီအမျှ စေလွှတ် ခွင့်ပြုရန်။
၇။ မူဆလင်အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ကောလိပ်များတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန်။
ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေကို ဘယ်လောက်ရက်စက်ခဲ့လဲ ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Violence in Thailand's Muslim South Intensifies
Thailand cracks down on religious
Islamic Crusades 4: Lessons From the Thai Jihad
South Thailand's separatist movement - 27 Sep 07
Bombing in Thailand caught on camera
Bomb explosion in Thailand.
ကုလားထုံးဆန်အတိုင်း သူတို့ ခွေးအလုပ်လုပ်တာကို တစက်လေးမှာ ထည့်မပြောပါဘူး။ သူတို့ ခံရရင် မျက်ရည်လေးဝိုင်းပြီး အခုလိုဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ပြတတ်ပါတယ်
(ယုံကြည်ချက် ။ ။ မုဒိမ်းကောင် လူရမ်းကား ၀ါဒကို ဒေါသမထွက်ပါနဲ့… နှိပ်ကွပ်ရလို့လဲ ပီတိမဖြစ်ပါနဲ့. . . ကုလားကိုလဲ လူမျိုးရေး မနှိပ်ကွပ်ပါနဲ့ . . အဲဒါတွေက အကျိုးမရှိပါဘူး။ ယုတ်ညံ့သည့် ၀ါဒဆိုးကြီးကို ဖြိုဖျက်ရေးမှာ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရေးက လက်တွေ့အကျဆုံးဖြစ်ပါသည် )
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:58 PM
* * * အရဟံ * * *
★ မြန်မာဆိုတာမင်းမမေ့နဲ့ ★
★ ဇလွန်ဆရာတော်ကြီး၏ မပုတ် မသိုးသည့် ရုပ်ကလတ်တော်
★ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ဝင်းကြည်
★ My Thought
Reality and Illusion in Politics
Media Misrepresent the Public
ရွံရှာဖွယ် Subliminal Message
★ Frequently Asked Questions
★ The different arabic versions of the qur'an
★ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကိုရမ်ကျမ်းမြတ်မဟာ ဖြစ်စဉ်
★ Absurdity in the Quran
★ Science and History
★ The X-Rated paradise of Islam
★ Cruelty and Violence
လူမှန်လျှင် လူရမ်းကားဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ရမည်
★ မိန်းခလေးများကို ဖျက်ဆီးနိုင်သူကို ပလီမှ ဆုငွေပေးကြောင်း အထောက်အထား
★ Answering Islam
★ The Religion of peace
★ Islam Truths
★ Islam Watch
★ Prophet of Doom
★ Apostates of Islam
★ Faith Freedom
★ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအမည်ခံထားသော်လည်း မွတ်ဆလင်ကနေလုံးဝထွက်ခွင့်မပေးပါ
★ မွတ်ဆလင်ကထွက်ရင် သတ်ပြစ်ရမယ်လို့ တီဗီပေါ်မှာပြောရဲတဲ့ ပလီဆရာ
★ ချွေးမနဲ့ ဖေါက်ပြန်တာ ဂုဏ်ယူတဲ့ မွတ်ဆလင် စိတ်ဓါတ်
★ မွတ်ဆလင်မတွေ သူတို့ပစ္စည်းကို ဓါးလှီးခံကုသိုလ်ယူခြင်း
★ သမီးအရင်းနဲ့ ကာမစပ်ယှက်ဖို့သင်ကြားချက်
★ မွေးကင်းစခလေးငယ်နဲ့ ကာမစပ်ယှက်ခွင့်ရှိတဲ့ ယုတ်ညံ့ဝါဒ
★ နအဖမီဒီယာနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာရဲ့ အပယ်ခံဗီဒီယို
မုဒိမ်းကောင်လူရမ်းကားဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေး မြန်မာ့ဘလော့များ
- ၇၈၆ အန္တရာယ် ကြေငြာစာတမ်း ====================== (မြန်မာတိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်ရှုစေချင်ပါသည်) ဤစာစုကို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အကျိုး အတွက် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ကြည့်...
★Pedophilia Be Upon Him
ကမ္ဘာသည် အပြင်တွင်လုံး၍ ကိုရန်ထဲတွင် ပြားပါသည် - ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ကိုသွားသတိရမိတယ်။ မြေးအဖိုး၂ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ မြေးလုပ်သူက သူငယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသွားတ...
လူမျိုးမပျောက်ရေး စိတ်မအေးနဲ့ - လူမျိုးမပျောက်ရေး စိတ်မအေးနဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင်ခေါ်တောကုလားတို့သည်ဗမာ၊ကရင်၊ရခိုင်၊မွန်၊ကချင်၊ကယားစသော မြန်မာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ဝါးမျိုရန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ...
- The only thing necessary for the triumph of Evil Islamization is …..for good men to do nothing. နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော် အတွင်း မွတ်ဆလင်တို့ ဧ။် ကျူးကျော် သတ်...
Uganda မှာ သာသနာရောင်ဝါထွန်းဖို့ မြန်မာတွေလည်း ကူည...
North Indian Muslim Woman Leaves Islam and Marries...
Mohammed Was NOT A Pedophile!
မွတ်ဆလင်သည် လူရမ်းကားဝါဒဖြစ်ကြောင်း သက်သေဗီဒီယို
Meditation—not just for your average JewBu anymore...
A mindful distraction for pain and depression
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် ဖြစ်သည်
မွတ်ဆလင် ဘ၀နှင့် စရိုက်
မွဆလင်ရဲအဖေ ဂျူးတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ရင် JuBu လို့...
ကုလား အဖိုးအဖွားတို့၏ ကျောင်းတော်တူးဖေါ်တွေ့ရှိ
Buddhism fastest-growing religion in Singapore
Buddhism Helping Westerners Find Respite From A Gr...
မိုနှာမက်နှင့် သူချွေးမ၏ အချစ်ဇတ်လမ်းဗီဒီယို… ဒန်း...
မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကို . . . သူတို့ .. . တိရိစ္ဆာန...
Allahu Akbar အော်တဲ့သူသည် ဥာဏ်မရှိသူဖြစ်၏
ဘာသာရေးဗဟုသုတများ(၁) နှင့် (၂)
သာသနာကွယ်ဖို့ အကြောင်းတရား၊ သာသနာ ကွယ်မည့် သက်တမ်း...
Calm amid the storm for carers
I amaSaudi ex-Muslim
I really hated you
Building up the brain
Malaysia court upholds Muslim's return to Buddhism...
Incentives for marrying and converting orang asli
Compassion meditation can act asagreat stress bu...
ပသူရသုတ်- ၀ါဒပြိုင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍...
Is It True That the Buddha Would Just BeaPhysici...
မိုဟာမက်နဲ့ အမျိုးတော်သူ ဆော်ဒီအမျိုးသမီးက Quran က...
Think on This: Meditation May Protect Your Brain
မေ ဖေ မေတ္တာ ဘယ်သို့နှိုင်းရမည်
မုဒိမ်းကောင်တပည့်များ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချင်းချင်း...
Charles Darwin 'inspired by Tibetan Buddhism'
Yale psychiatrist uses Buddhist concept to help sm...
Young Indian Muslimah Leaves Islam for Her Ancestr...
I Believe in Bugs Bunny Part II
မိုဟာမက်တပည့် ၇ နှစ်သမီးငယ်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊ ...
I Believe in Bugs Bunny (DEBATE PART I)
Can Mindful Eating Help You Lose Weight?
မွတ်ဆလင်မတွေကို ဘယ်လို ထိမ်းရမလဲ?
UN may make ban on criticizing Islam mandatory, ma...
Buddhist meditation 'as good as drugs' at beating ...
Here is my testimony about how I left Islam
ဖာသည်မဖင် နှင့် မွတ်ဆလင်